iOS uye macOS ichave padyo asi haizobatanidze | Ndinobva mac
Iyi yanga iri imwe yenguva yeshoko reApple, apo Craig Federighi, anga achiratidza slide ne "NO." hofori achinongedza akananga kune mazhinji makuhwa ekuti iOS uye macOS zvaizobatana mune isiri kure kure ramangwana.
Zvinotaridza kuti vanga vachida kujekesa kuti izvi hazvisi kuzoitika kunyangwe chiri chokwadi icho mazhinji maturusi matsva anoenderana neese masisitimu kushanda uye kuti izvi zvichave padhuze kupfuura nakare kose maererano nemashandiro avanopa kune avo vanoshandisa Mac ne iPhone.
Hatisi kuzove nekubatanidzwa sekuda kwedu vazhinji
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Software Apple yakayambira nezve chishandiso chitsva chekuisa zvikumbiro kubva kune imwe sisitimu kuenda kune imwe nenzira iri nyore kwazvo kune vanogadzira, asi hapana mamiriro ezvinhu maOS maviri aya achabatana zvakakwana. Zvinotaridza kuti chishandiso chinoshanda kune avo vanogadzira vanoda kuendesa kunyorera kubva kune imwe system kuenda kune imwe se vakazviratidza neApple News, HomeKit uye Bolsa ye macOS. Aya maapplication akaiswa mukati chaiko kubva kuIOS kuenda macOS.
Asi iyi ndeyakareba uye ndizvozvo kusvika 2019 idzi shanduko nemidziyo hazvizotanga kuitiswa yevanogadzira. Mushure mekumanikidza kwakanyanya uye runyerekupe pamambure nezve mukana wekubatanidza ese mashandiro esisitimu kuita imwechete uye nekugovana zvese zvinoshandiswa pakati pavo, Apple yakaenda padanho ichitsanangurira vese zvavo ramangwana zvirongwa zvavakagadzirira macOS uye iOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Mojave » iOS uye macOS zvichave padyo asi hazvizobatanidzwa
watchOS 5 haizoenderane neyekutanga chizvarwa Apple Watch